नेपालले ल्याबमा एमआरए मान्यता पायो– सरकार, डाक्टर र बिरामीलाई के फाइदा? डा केयुर गौतमसँग भिडियो वार्ता :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
नेपालले ल्याबमा एमआरए मान्यता पायो– सरकार, डाक्टर र बिरामीलाई के फाइदा? डा केयुर गौतमसँग भिडियो वार्ता
रिता लम्साल सोमबार, फागुन २४, २०७७, १३:२५:००
काठमाडौं– नेपालले मेडिकल ल्याबको क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको एमआरए मान्यता प्राप्त गरेको छ ।
एमआरए मान्यता प्राप्त भएसँगै नेपालका प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणले पनि अब अन्तराष्ट्रिय मान्यता पाउने ल्याबको गुणस्तरका क्षेत्रमा लामो समदेखि सक्रिय रहँदै आएका अभियान्ता तथा सम्यक डाइग्नोष्टिकका अध्यक्ष डाक्टर केयुर गौतमले बताए।
स्वास्थ्यखबरको कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा कुराकानी गर्दै डाक्टर गौतमले नेपालले एमआरए मान्यता प्राप्त गर्नु नेपाल सरकार, नेपाली चिकित्सक र बिरामीहरुका लागि फाइदाजनक रहेको समेत बताए।
एमआरए मान्यता पाउनु भनेको कस्तो हो? नेपालले एमआरए मान्यता प्राप्त देशको सूचीमा कसरी पर्‍यो? राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मेडिकल ल्याबलाई दिने मान्यता र यो एमआरए मान्यताबीच के फरक छ? लगायतका विषयमा डा गौतमसँग कुराकानी गरेका छौं ।
प्रस्तुत छ डा गौतमसँग गरिएको भिडियो संवादको सम्पादित अंशः
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आइसक्यो: डा गौतम (भिडियोवार्ता)
अध्ययन कोटा हटाएपछि दुर्गममा सेवा दिएका सरकारी नर्सहरू न्याय माग्दै काठमाडौंमा
ट्रमा सेन्टरको शय्यामा सम्झनाका पीडा : रोग लागेपछि श्रीमान् नै सम्पर्क बिहीन
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आइसक्यो: डा गौतम (भिडियोवार्ता) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरू भइसकेको बताएका छन्। १४ घण्टा पहिले